U-Omar, okanye njengoko kuthiwa yi-lobster, ingowomndeni wabakristaceans. Ngokungafani ne-crayfish yomlambo, inobungakanani obukhulu, umbala omnyama kunye nethenda. Igama elithi "lobster" lafika kuthi kwisiFrentshi, "lobster" - evela eNgilani. I-lobster inyama yinto efanelekileyo yokutya. Iqukethe inani elikhulu leepoprotein, eziyimfuneko ekusebenzeni ngokuqhelekileyo komzimba.
I-lobster ingakwazi ukufikelela ubude obungamashumi amahlanu ububanzi kwaye isilinganise malunga neekhilogram ezine. Kwimbali, ityala lokubamba i-lobster 70 centimeters ubude kwaye isisigidi ezili-11 sarekhodwa! Nangona kunjalo, ixabiso eliqhelekileyo lalo hlobo lokudla lifika kuma-20 ukuya kwisentimitha ezingama-30 kwaye lilinganisa malunga ne-800 amagremu.
I-Lobsters, i-lobster iphinda ihlale kwindawo ephantsi kwamanxweme aseMntla neMedithera kwiindawo ezili-20 ezide. Badla i-shellfish, ii-crustaceans ngezinye izihlandlo. Igobolondo ye-crayfish yolwandle inamandla kwaye ikhusela inkosi yayo ekuhlaselweni kwabamtsha. Xa i-lobster iguqula igobolondo yayo, iyingozi. Ngeke kuthathe ngaphantsi kweenyanga de ibe ikhaya lakhe elitsha liqina kwaye lomelele ngokwaneleyo.
I-catch main lobster e-Norway. Isilinganiso samashishini ekuloba i-lobster sengozini yokuphila kwabo. Ayikho indima encinci idlalwe ngcoliseko lwezilwandle zehlabathi. I-Crustaceans inomdla kwiindawo ezikhoyo. Emanzini angcolileyo, bafa nje. Umngcipheko uqaliswa: kunokwenzeka ukubamba abantu abangaphezu kwama-25 centimeters ixesha elide ngexesha elichanekileyo. Iimeko ezinje zandisa kakhulu iindleko zokudla kwamanzi.
I-Lobsters izama ukuzalisa kwiifama. Nangona kunjalo, ngenxa yokukhula kancinci kwabantu, malunga neminyaka engama-30 kufuneka idlule ngaphambi kokuba angene ngexesha lokutshatyalaliswa nokulungela ukuvelisa.
I-lobster inyama yintlanzi yolwandle yangempela. Iqulethe amaxesha angama-calori angaphantsi kweenkukhu inyama. I-lobster ipheka izitya ezimnandi. Ngokomzekelo, isidlo sasePeruvia sisinxibe. Ingxube ebandayo esuka kwintlanzi yokuloba, ihlanjululwe kwijisi yelisi.
Ukupheka isobho se-Caribbean, inyama ye-lobster ibilisiwe kwipuphu yenkukhu, yongeza i-pepper e-sweet and Worcester sauce. Kulezi zithako, i-soup-puree ethile ifunyenwe.
EItali, bayayithanda i-pasta. Kodwa nakhona bapheka i-lobsters. I-Fetuccini (uhlobo oluthile lwepasta) lulungiselelwe ukusuka kwintlanzi yokuloba kunye ne-sausage. Udibaniso olunjalo olungavamile lubangela ukucinga komntu wokuqala ozama okokuqala. EJamaica, iisobho zilungiselelwe ukusuka kwi-lobster, kwi-mussels nakwezinye izidlo ezilwandle.
EFransi, abaxhasi bezilwanyana zaselwandle badume kakhulu. Ngasenyakatho yeFransi ukusuka kwi-lobster ibilisa isobho esingenakuthi. EJapan, i-sushi iphekwe kwi-lobster. Okanye upheke ngokwahlukileyo kwindawo ekhethiweyo ye-pan yok kunye ne-ginger kunye neziqholo. I-Spain idume nge-paella yayo ne-lobster, e-Italy i-lobster yongezwa kwi-laznja.
U-Omar, ongu-lobster, ungene kwilizwe lokutya kwamazwe amaninzi. Nangona kunjalo, inokubiliswa nje, ibanjwe kwigobolondo.
Ngaphambi kokuba uzame inyama yobuncwane bomhlaba, uya kufuna umgudu wokuvula igobolondo yayo. Ngokwemiqathango, iifowuni zokuqala ziyacinywa, ke igobolondo ayifumene, inyama ichithwe, i juisi yelisi okanye i-juice ijusi ithululelwa.
Kwiivenkile, i-lobster inikwe iwayini elimhlophe, eligxininisa ngokugqithiseleyo ukunambitheka kokutya okulwandle.
Ukuba uthatha isigqibo sokuthenga i-lobster entsha, sebenzisa iingcebiso zethu. I-lobster kufuneka iphile, ukuba uyayidonsa, uya kuqala ukuhamba. Umbala wobuncwane baselwandle unokuba luhlaza okwesibhakabhaka okanye luhlaza. Igobolondo kufuneka iqine. Oku kubonisa ubukho benyama ngaphakathi.
I-lobsters edibeneyo iphunga iyanandi kwaye ibe nebala elibomvu. Umsila kufuneka uphazamiseke. Ukuba uthe tye, kuthetha ukuba i-lobster yayiphekwe xa sele sele ifile.
Ukupheka i-lobster ekhaya kulula. Kwanele ukuthulula amanzi epanini, ukuzisa emathunjini, ityuwa kunye neyokuqala phantsi kwentloko, kwaye umzimba wonke ungene emanzini. I-Lobsters ibilisiwe iminyaka emi-15-20.
I-corn cereal: iivithamini, i-microelements
Izitya ezifanelekileyo zokutya zase-Ukraine
Ezi zintlanu ezibaluleke kakhulu kwiivithamini kunye neemaminerali zabantu
Barberry kunye nezixhobo zayo ezincedo
Ngaba indoda idinga umfazi wekhaya?
Indlela yokulawula umsindo emsebenzini?
Ukugwenxa kweGlamor: uKatya Gordon uthetha okubi ngo-Svetlana Bondarchuk oguga
Ungathini ukuxabana nomthandayo?
Ukungasebenzi kunye noAndrei Arshavin bacele ukuxolelwa kwabalandeli